October 2014 - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Menstruation (4) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၄)
သမီးတစ်ခုလောက်သိချင်လို့ပါ။ ကန်တော့ဆရာ၊ သမီး ဓမ္မတာအကြောင်းလေးပြောချင်လို့ပါ သမီးအသက်က ၁၉ နှစ်ပါ သမီး ရာသီလာတာ နှစ်လမှ တစ်ကြိမ်ပဲလာပါတယ်။ လာလဲ ၄ ရက်ကအများဆုံးပါပဲ။ အရင်ကဆို ၆ လလောက် မလာလို့ ဆေးခန်းမှာ ရာသီလာဆေးသွားထိုးရပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ ရာသီနည်းလို့ ဆေးခန်း ထပ်ပြရပါသေးတယ်။ ဆေးသောက်လဲခဏပါပဲဆရာ။ ပြီးရင် ရာသီအလာနည်းသွားရော။ အခုနှစ်လတစ်ခါမှလာတော့ အရမ်း စိတ်ညစ်နေပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဘယ်ဆေးကို သောက်ရမလဲ လု့်ညွှန်ပြပေးပါဦးဆရာ။ ပြီးတော့ ဘာဖြစ်လို့အဲ့လို ဓမ္မတာလာတာ နည်းရသလဲသိချင်လို့လာပါ။ လာနေချိန်မှာရော လာပြီးအချိန်မှာရော ကိုက်ခဲတာတွေ လုံးဝ မဖြစ်ဖူးပါဘူးဆရာ။
ရာသီဆိုတာ မမှန်ဖြစ်တာ များပါတယ်။ သိပ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ၁၉ နှစ်မှာ မှန်နေသင့်တာတော့ မှန်ပါတယ်။ ရောဂါရယ်လို့ မဟုတ်လောက်ပါ။ အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ ကိုယ်ဝန်တားဆေး (ဆောရီး) သောက်ရတယ်။ တနေ့ ၁ လုံး၊ တလ ၂၈ လုံးပါတာကိုပြောတာပါ။ အပျိုတွေလဲ ပေးပါတယ်။ သံသယအထင်မခံရအောင် သူများမမြင်အောင် ပေးရ-သောက်ရပါတယ်။ ရာသီလာရက်ကို မများစေသင့်ပါ။ များရင် သွေးအားနည်းမယ်။ ဆင်းသင့်တာသာ ဆင်းပါမယ်။ ကျန်နေတာမျိုးမဖြစ်ပါ။ တားဆေးသောက်ရင် (၁) လမှန်မယ်။ (၂) ဆင်းတာနည်းမယ်။ (၃) နာတာကိုက်တာ သက်သာမယ်။ ရာသီဆိုတာ အသက်အရလဲပြောင်းတယ်။ စိတ်ဖိအားအရလဲပြောင်းမယ်။ အဓိကအားဖြင့် ဟော်မုန်း အပေါ်မူတည်တယ်။ ဟော်မုန်းက တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါ။ ရောဂါရှိမနေရင် ဘာမှ ကြောင့်ကျဘို့မလိုပါ။
သမီးက အသက် ၂၃ နှစ်ပါ။ ရာသီလာတာ မမှန်ပါဘူး။ တခါတလေ ၂ လမှ တခါ လာပါတယ်။ အရင်ကတော့ အမေက သွေးဆေး အမြဲတိုက်ပါတယ်။ မြန်မာဆေးတွေ။ ခုက ဒီမှာ ဝယ်လို့လည်း မရပါဘူး။ ခု ဝက်ခြံတွေလည်း မျက်နှာမှာရော ကျောမှာပါ ပိုပေါက်လာပါတယ်။ သူငယ်ချင်းကပြောလို့ ချင်းပြုတ်ရည်လည်း သောက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ဖြေကြားပေးပါရှင်။
ရာသီမမှန်တာ မိန်းကလေး အတော်များများမှာ ဖြစ်ကြလေ့ရှိတယ်။ ၂ လမှ တခါ လာယုံနဲ့ ဘာမှ စိုးရိမ်စရာ မလိုပါ။ ဝက်ခြံလဲ ပေါက်တယ်ဆိုရင် အပျိုဖြစ်မှာပေါ့။ သိပ်ရင်းနှီးလွန်းတဲ့ သမီးရည်းစားတောင် ထားပုံမရဘူး။ ဆေးပညာအရ ဖြစ်ဘို့ များတာကို ပြောတာပါ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စပ်စုတာ မဟုတ်ပါ။ ဗေဒင်ဟောတာလဲ မဟုတ်ဘူး။ မမှန်ရင်လဲ “မှားသော ဆေးသမား ရှိ၏” လို့ မှတ်ပါ။
ဗမာသွေးဆေးတွေကလည်း အသုံးတည့်သူတွေမှာ တည့်တယ်။ ချင်းပြုတ်ရည်ကလည်း တချို့အတွက် အလုပ် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ပိုပြီးသိရရင် ပိုကောင်းမယ်။ “ပိန်သလား၊ ဝသလား၊ ပိန်လာနေသလား။ ကျန်းမာရေး နောက်ကြောင်းမှာ ထူးခြားတာ ရှိသလား။ ဆေးရုံတက်ရဘူးတာ၊ ဓါတ်မှန်ရိုက်တာ”။ မသိတာ အသာထားပြီး ယေဘုယျ ဖြေပါ့မယ်။
ရာသီမမှန်တာမှာ ပတ်ဝန်းကျင်လို့ ခေါ်လေ့ရှိတဲ့ အကြောင်းခံရှိတတ်တယ်။ နေမကောင်းတာ ဥပမာ တီဘီ၊ စိတ်ဖိစီးမှု များတာ၊ အာဟာရ မပြည့်တာ၊ သွေးအားနည်းတာ၊ လေ့ကျင်ခန်း အလုပ် များလွန်းတာ၊ ခရီးထွက်ရဖန် များတာတွေ ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒါတွေကို ပြင်ပါ-ကုပါ။
နောက် အကြောင်းခံ တမျိုးကတော့ ဇီဝကမ္မ အပြောင်းအလဲ ရှိလို့ပါ။ ရာသီဆင်းတာကို ထိန်းပေးနေတာ သုံးခုဟာ အထာမကျရင် ရာသီလာ မမှန်ဘူး။ နောက်ဆုံး အကြောင်းခံတခုကတော့ Polycystic ovarian syndrome (PCOS) ရောဂါပါ။ (ရေးထားပါတယ်။) လိုမယ် ထင်ရင် OG ပြပါ။ Oligomenorrhea ခေါ်တဲ့ ရာသီနည်းလွန်းရင် သားသမီး မရနိုင်တာ ဖြစ်စေတတ်တယ်။ ဒါတွေ ထည့်ရေးတာက ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ မပြည့်မစုံရေးလို့ မကောင်းတဲ့ အတွက်ပါ။ လူ ၁ဝဝ-၁ဝဝဝ မှာ ၁ ယောက် ဖြစ်တာလဲ ပါရတယ်။
ဝက်ခြံဆိုတာ ရာသီဆင်းတာလိုဘဲ ဟော်မုန်းဓါတ် အပြောင်းအလွဲကြောင့် ဖြစ်စေတာပါ။ လူတိုင်းမှာ ကျား-မ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးလုံး ရှိကြတယ်။ Androgens ကျားဟော်မုန်းက ပိုကဲနေရင် ရာသီနည်းတာ ဖြစ်စေတယ်။ အရေပြား မသန့်ရှင်းတာ၊ လေထု မသန့်တာကြောင့်လဲ ဖြစ်စေနိုင်သေးတယ်။
ဝက်ခြံကို လက်နဲ့ ခဏခဏ မကိုင်ပါနဲ့။ မျက်မှာမှာ ပေါက်တဲ့ ဘာအနာဖြစ်ဖြစ် မမှည့်သေးခင် ညှစ်မထုတ်ရပါ။ သွေးအားအတွက် Ferrous ဆေး၊ Folic acid ဆေးတွေသောက်ပါ။ ဝက်ခြံအတွက် ဗီတာမင် B အပြင် A သောက်ဘို့ လိုတယ်။ Zinc ဓါတ်များတဲ့ အစားအစာ (ပင်လယ်စာ၊ အစေ့အဆံ၊ အသဲ၊ ငါး၊ ဥ၊ ဂျုံ၊) နဲ့ Chromium ဓါတ်များ အစားအစာ (သစ်သီးဖျော်ရည်၊ ငှက်ပျောသီး၊ စပျစ်သီး၊ အာလူး၊ အမဲသား၊ မုံလာဥစိမ်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊) စားပါ။ တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပါ။ ခေါင်းအုံးစွပ် ၂ ရက်တခါ လဲပါ။ မျက်နှာကို ဆံပင်က လာလာမထိစေသင့်ပါ။
လစဉ် ရာသီလာနေသူများလဲ ဝက်ခြံပေါက်တတ်တယ်။ တရားခံက Androgens ပါဘဲ။ ဝက်ခြံမှာ ခေါင်းဖြူ-ခေါင်းမဲ ၂ မျိုး ရှိတယ်။ အဖြူက အရေပြားထဲ မြုတ်နေပြီး၊ အမဲက အပေါ်မှာ။ ပြည်ဖြစ်လာရင် ဝါလာမယ်။ သန့်ရှင်းရေး လုပ်တာက အပြင်းစားမဟုတ်တဲ့ ဆပ်ပြာ၊ ဗက်တီးရီးယားသေစေနိုင်တဲ့ Neem soap တမာဆပ်ပြာလဲကောင်းတယ်။ မျက်နှာ အဆီမပြန်စေနဲ့။ မိတ်ကပ်သုံးစရာရှိရင် နဲနဲ-ပါးပါးသာသုံးပါ။ အရေပြားက (ဆဲလ်)တွေ လေဝအောင်လို့။ သေသွားတဲ့ (ဆဲလ်) ခပ်ညိုညိုတွေကို အသာအယာ ဖယ်ထုတ်ပေးပါ။ ရေနွေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်ပါ။ ရေများများသောက်ပါ။ နံ့သာဖြူလိမ်းတာလဲ ကောင်းပါတယ်။
ပုံမှန်ရာသီက ၂၈ ရက် ၁ ခါ လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရာသီလာပြီး ၁ဝ ရက် ၂ ပတ်လောက်နေရင် နဲနဲ ပြန်လာနေတတ်တယ်။ ပုံမှန်လိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ အပေ့ါသွားရင် ထွက်လာတာမျိုး အဖြူနဲ့ ရောပြီး ထွက်လာတာမျိုး။ Daily pad အသေးလေးတွေ သုံးရတာပေါ့။ အဲဒါဘာလို့ ဖြစ်တာလဲ။ တခုခုများ အထဲမှာ ဖြစ်နေလို့လား။ အရင်က မဖြစ်ဖူးပါဘူး ဒီလိုဖြစ်တာ ၃-၄ လ လောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ်က အိမ်ထောင်ကျပါတယ်။ မင်္ဂလာဦးည ပြီးတော့ နောက် ၃-၄ ရက် လောက်မှာ အဲလိုမျိုး ဆီးသွားတဲ့ အချိန် လေလည်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ အနီထွက်လာတယ်။ အဲဒါက ပုံမှန်ပဲလား။ အဲလိုဖြစ်တဲ့ ဒီအပတ်မှာ ပြန်နေဖြစ်တော့ စ စခြင်းတော့ ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် နောက်တော့ အနီနဲနဲ ဆင်းလာတယ်။ သမီးတို့ အသက် ၂၈ ကိုယ်စီပါ။ ယောက်ျားကတော့ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ ကျန်းမာပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ နာကျင်မှုတော့ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်ဝန်တားဆေး မသုံးပါဘူး။ ယားတာတော့ မဖြစ်ပါဘူး။ အရင်ထဲက အဖြူကတော့ တခါတလေ ဆင်းတယ်။ အိမ်ထောင်ကျတာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကမှပါ။ အိမ်ထောင်မကျခင် ၄-၅ လ လောက်မှာ အဲလို ဖြစ်တာကို သတိထားမိတာပါ။ အနီသက်သက် ဆင်းလာတာမျိုး အဖြူနဲ့ ရောပါလာတာမျိုးပါ။ သူလဲ လန့်နေသလို သမီးလဲ လန့်နေတယ်။
ဖြစ်တတ်တဲ့ အခြေအနေတခုသာ ဖြစ်တယ်။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ရာသီများလာတဲ့သဘော ဖြစ်ဘို့ များတယ်။ ဒီအသက်မျိုးမှာ ရောဂါကြီး မဖြစ်သလောက်ပါ။ ဆီးစပ်နေရာကို ဖိကြည့်လို့လဲ နာပုံမပေါ်ပါ။ နာရင် မျိုးပွါးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်တာမျိုး စဉ်းစားရတယ်။ အခု ဟုတ်ပုံမရပါ။ တခြားနေရာ (နှာခေါင်း၊ သွားဖုံး) ကနေ သွေးမယိုတာ မဖြစ်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီတော့ ရာသီမှန်အောင်လုပ်ဘို့ဘဲ လိုမယ်။ ဘာမှ မလုပ်ဘဲနေရင်တောင် မှန်လာတတ်သေးတယ်။ အိမ်ထောင်ကျ လိုက်တော့ ဟော်မုန်း အချိုးအစားလဲ ပြောင်းလာနိုင်လို့ပါ။
အိမ်ထောင်ကျပြီး ဆက်ဖြစ်နေသေးပြန်တာမို့ OG မပြခင် ဆေးစားကြည့်ပါ။ မွေးလမ်းကြောင်းစမ်းတာ လုပ်ရင် ပိုပြီး ခန့်မှန်းနိုင်တယ်။ အလွယ်ဆိုးနည်းကတော့ ကိုယ်ဝန်တားဆေး သောက်ပါ။ အများဆုံး သုံးနေကြတဲ့ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲဆေးပြား သောက်ပါ။ တနေ့ ၁လုံး ၂၈ ရက် သောက်ရတာမျိုး ပြောတာပါ။ ရှာရတာလဲ အလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဆေးပါ။ ရာသီ တခါဆင်းအောင် စောင့်ပါ။ ဆင်းတာရပ်တာနဲ့ ဆေး တနေ့ ၁ ပြားသောက်ပါ။ ဆေးမကုန်ခင် ရာသီ ပြန်မဆင်းပါ။ အဲလို လမှန်-ရက်မှန်ဖြစ်တာ ၃-၄ လ နောက်မှာ ရပ်လိုက်ပါ။ ဆေးကို မနက်ခင်း သောက်တဲ့အကျင့်လုပ်တာ ကောင်းတယ်။ မေ့သွားရင် နေ့ခင်းသောက်လိုက်လို့ ရတာမို့ ရက်မကျော်တော့ပါ။ အထောက်အကူအဖြစ် သံဓါတ်အားဆေးနဲ့ ဗီတာမင် စီ သောက်ပါ။ ကျန်းမာ-ချမ်းသာကြပါစေ။
ရာသီလာရင်နာတာ Dysmenorrhea မှာ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာ မရှိပါ။ NSAIDs ခေါ်တဲ့ Aspirin, Ibuprofen, Ketoprofen, Naproxen, Meferannic acid စတဲ့ အနာ-အကိုက်-အဖျား သက်သာဆေး တခုခု သောက်ပါ။ နေရာတကာ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေက ဆေးကို နာမယ် အမျိုးမျိုး ပေးကြတယ်။ နာတတ်တဲ့သူတွေ သွေးဆင်းစ ကတည်းက သောက်သင့်တယ်။ ၂-၃ ရက် ထက်မလိုပါ။ တနေ့ ၃ ကြိမ်ဆို ရတယ်။ ဆေးကို အစာနဲ့ နီးပါစေ။ တကယ် လေနာရှိရင် သတိထား သောက်ပါ။ ဒီဆေးနဲ့မှ မရသူတွေကို Oral contraceptives ကိုယ်ဝန် တားဆေး ပေးရတယ်။ နာတဲ့နေရာကို ရေနွေးအိပ် ကပ်နိုင်တယ်။ လေ့ကျင်ခန်း လုပ်သင့်တယ်။ ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးသင့်တယ်။
သမီး အသက် ၂၇နှစ်ပါ။ သမီးက အပျိုပါ။ ရာသီလာတာ တလ တခါမဟုတ်ဘဲ ၂ လ တခါ၊ ၃ လ ၂ခါ ဖြစ်နေတာ ၂ နှစ်လောက် ရှိပါပြီ။ ခု ဒီတခါကျတော့ ရာသီမလာတာ ၃ လ ရှိပါပြီဆရာ။ ဒီရက်ပိုင်း ဆီးစပ်တွေကိုက်ပြီး ရာသီလာရင် ဗိုက်နာသလို နာနေပါတယ်။ ရာသီက မလာသေးပါဘူး။ ဒါနဲ့ ဂျင်းနဲ့ ထန်းလျက်ကြိုသောက်တော့ ဗိုက်က မနာတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗိုက်ထဲက နေလို့မကောင်းဘူးဆရာ။ သမီး ရာသီလာတာ ၂ လတခါ လာတာ အန္တရာယ်ရှိလား သိချင်ပါတယ်။ ခုတလော ဗိုက်နာနေတာကိုလည်း သက်သာချင်ပါတယ်ဆရာ။
ကြားရက် သွေးဆင်းနေရင် ဘာမဟုတ်တာလေးတွေလဲ အရင်စဉ်းစား ပြုပြင်ရမယ်။ တားဆေးသောက်ဘို့ မေ့သွားတာ၊ မွေးလမ်းမှာ အနာ ဖြစ်နေတာ။ သိပ်ဆိုးဝါးတာတွေလဲ ရှိတယ်။ သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ခြင်း၊ ကင်ဆာ။
ရာသီလာလို့ တအားနာနေရင် အနေရအထိုင်ရ မသက်သာသူတွေများတယ်။ ဗိုက်နာတာလဲပါတယ်။ နဲနဲလောက်၊ ၁-၂ ရက် လောက်ဆို စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ရာသီလာချိန်မှာနာတာကို Dysmenorrheal ခေါ်တယ်။ တချို့မှာ ပျို့-အန်ချင်၊ ဝမ်းပျက်၊ ခေါင်းကိုက်၊ ခါးနာတာတွေလဲ ဖြစ်တယ်။ စိတ်မူပြောင်းသူတွေလဲရှိတယ်။ (သပ်သပ်ရေးထားပါတယ်။) ရာသီလာချိန်နာတာကို NSAIDs (စတီရွိုက်) မပါတဲ့ အများသုံး အကိုက်-အခဲပျောက်ဆေးသောက်ရင် သက်သာတယ်။ သတိထားရမှာတွေကတော့ Endometriosis (အင်ဒိုမီထရီယိုးဆစ်) သားအိမ်ရောဂါ နဲ့ Fibroids (ဖိုက်ဘရွိုက်) သားအိမ် အကျိတ်ရောဂါတွေ ပါတယ်။ ဆေးစစ် ကုသရလိမ့်မယ်။
ကြားရက် သွေးဆင်းတာကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။
- IUCD ကိုယ်ဝန်တား-ပစ္စည်း၊
- (အီစထိုဂျင်) ဟော်မုန်းဆေးပေးနေသူ အစပိုင်းနဲ့ အဆုံးရက်တွေ၊
- Uterine fibroids သားအိမ်အလုံး၊
- လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေ၊
- Cervical polyps သားအိမ်ဝမှာ အညှာပါ-အလုံးရှိတာ၊
- Cervical erosion သားအိမ်ဝရောဂါ၊
- ဗဂျိုင်းနာ၊ သားအိမ်၊ မျိုးဥအိမ်မှာ Cysts အလုံးရှိတာ၊
- မွေးလမ်း ထိခိုက်မိတာ၊
- ဗဂျိုင်းနားထဲ ပစ္စည်းတခုခု ကျန်ရစ်တာ၊
အများဆုံး ဖြစ်တာက Ovulation bleeding မျိုးဥထွက်ချိန်မှာ သူဖြစ်လာရာအိတ် Follicle ကနေ မျိုးဥ ပေါက်ထွက်ချိန်မှာ ဖြစ်တယ်။ ၂-၃ နာရီလောက်ကနေ ၁-၂ ရက်အထိ ကြာတတ်တယ်။ တချို့မှာ နာတာနဲ့ တွဲနေတယ်။ မျိုးဥထွက်ခါနီး (အီစထိုဂျင်) ဟော်မုန်း များ-နည်းရာကနေ သားအိမ် အတွင်းနံရံပါးလို့ ဆင်းတာပါ။ ဒါ့ကြောင့်ဆိုရင် Estrogen ပေးလို့ ပျောက်တယ်။ တခြား အကြောင်းတွေလဲ ရှိနိုင်တယ်။ Progesterone ဟော်မုန်း နဲနေရင် ရက်ကြာကြာ ဆင်းနိုင်တယ်။ အဲလို အမျိုးသမီးတွေဟာ ကလေးရဘို့ အခွင့်အလမ်းနဲပြီး ကိုယ်ဝန်လဲ ပျက်တတ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်တားစားဆေးကြောင့် ဆိုရင် အစနဲ့အဆုံးမှာ ဆင်းတတ်တယ်။ များသောအားဖြင့် ဒီဆေးမျိုးကို သောက်ဘူးခါစ ပဌမလတွေမှာ ဖြစ်တယ်။ ဆေးသောက်ချိန် လွဲသွားရင်လဲ ဖြစ်တတ်တယ်။
အရေးပေါ်ဆေးကုရာတာ ရှားတော့ရှားတယ်။ လိုအပ်ရင်တော့ ဆေးကုရမယ်။
- သွေးဆင်းများသူ တချို့ကို Estrogen (Conjugated) 25 mg IV ထိုးပေးရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် စားဆေး 2.5 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်ပေးမယ်။ သွေးရပ်သွားရင် Medroxy-progesterone 10 mg/d ကို ၇-၁ဝ ရက် ဆက်ပေးမယ်။
- တချို့ကို အများဆုံးသုံးတဲ့ Combination Oral Contraceptive ဟော်မုန်းနှစ်မျိုးတွဲ ကိုယ်ဝန်တား စားဆေး ပေးတယ်။ ဆေးထဲမှာ 1-0.75 mg Norethindrone နဲ့ 0.035 mg Ethinylestradiol ပါတယ်။ တရက်မှာ ဆေး ၄ ပြား၊ ၇ ရက် ပေးတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ၄ ပြား ၂ ရက်၊ ၃ ပြား ၂ ရက်၊ ၂ ပြား ၂ ရက်၊ ၁ ပြား ၂ ရက်နည်းနဲ့ ပေးတယ်။
- Medroxyprogesterone (Provera) ခေါ်တဲ့ Progestin (Progesterone) ဟော်မုန်းဆေးပေနိုင်တယ်။ ဒီဆေးက မျိုးဥ ပုံမှန်ထွက်စေတဲ့ဆေး ဖြစ်တယ်။ 10 mg/day ကို ၁ဝ ရက်ပေးမယ်။ ဒါပေမဲ့ OG ကပေးမှသာ သောက်ပါ။ ဆေးရပ်လိုက်တော့ သွေးဆင်းတတ်လို့။ ကင်ဆာ မရှိတာ သေခြာမှလဲ ပေးရတယ်။
- တချို့ကို D and C သားအိမ်ခြစ်ပေးရတယ်။
အရွယ်ရောက်စ မိန်းကလေးတွေနဲ့ သွေးဆုံးခါနီး အမျိုးသမီးတွေမှာ မျိုးဥအိမ်ကနေ မျိုးဥအထွက်ဘဲ သွေးဆင်တာ Anovulatory dysfunctional uterine bleeding ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ ကုသနည်းတွေကတော့ -
(၁) Estrogen (Conjugated) 2.5 mg တနေ့ ၄ ကြိမ်ပေးပြီ၊ သွေးဆင်းတာရပ်ရင် Medroxyprogestrone 10 mg နေ့စဉ်၊ ၇-၁ဝ ရက်ပေးတယ်။ ဒါမှမဟုတ်
(၂) ကိုယ်ဝန်တားဆေး (Ethyl Estradiol 35 µg + Noresthindrone 1 mg) တနေ့မှာ ၄ ပြား၊ ၇ ရက်ပေးတယ်။ ဒါမှမဟုတ်
(၃) ကိုယ်ဝန်တားဆေး (Ethyl Estradiol 35 µg + Noresthindrone 1 mg) တနေ့ ၃ ပြား၊ ၂ ရက်၊ ဒိနောက်မှာ တနေ့ ၂ ပြား၊ ၂ ရက်၊ ဒိနောက်မှာ တနေ့ ၁ ပြား၊ ၂ ရက်ပေးတယ်။ ဒါမှမဟုတ်
(၄) Medroxyprogesterone 10 mg/day ၁ဝ ရက်ပေးတယ်။
မေးတဲ့သူက အပျို၊ အသက်လဲ ၂၇ နှစ်သာရှိသေးလို့ ကိုယ်ဝန်နဲ့ဆိုင်တာ၊ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါတွေနဲ့ အသက်ကြီးမှ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ကင်ဆာတွေကို ဖယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ အပျိပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်တား ဟော်မုန်း ၂ မျိုးပါ၊ အများသုံး၊ ဈေးချို၊ တနေ့ ၁ ပြား၊ တလ ၂၈ ပြားသောက်ရတဲ့ဆေးကို ၃-၄ လ ဆက်သောက်ပါ။ ရာသီလဲမှန်မယ်၊ နာတာလဲ သက်သာမယ်။ ဆင်းတာလဲနည်းမယ်။ အဆင်ပြေရင် OG ကိုပြပါ။ စိတ်ဖိအား များနေရင် လျှော့ချပါ။
Menstruation (3) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၃)
“ဆရာ ကျမ ရာသီမမှန်ဘူး” ဆိုတာနဲ့ မပြီးသေးပါ။ ဒီမေးခွန်းတွေမေးပါတယ်။
၁။ Amenorrhea ရာသီမလာတာလား၊
၂။ Heavier Than Normal ရာသီလာတာများနေသလား၊
၃။ Bleeding In Between Periods ကြားရက် သွေးဆင်းသလား၊
၄။ Painful Period ရာသီလာလို့ တအားနာသလား၊
မိန်းကလေး-အမျိုးသမီးတိုင်းဟာ သီးသန့်သဘောဆောင်တယ်။ သူ့သဘာဝနဲ့သူရှိတယ်။ ရာသီ ရက်တိုမယ်၊ ရှည်မယ်၊ နည်းမယ်၊ များမယ်။ အပျိုဖြစ်ပြီး နှစ်တွေနဲနဲကြာရင် ကိုယ့်သဘာဝကိုယ် သိမှတ်ထားနိုင်ပြီ။ ငါ့ရာသီဟာ ဒီလိုဘဲလို့။ အများဆုံးက တလ ဆိုတာ ၂၈ ရက်၊ တလလာရင် ၃-၅ ရက်။ အဲလိုကနေ ထူခြားတာဖြစ်လာရင်တော့ သတိထားစရာတွေ ရှိလာမယ်။
၁။ Amenorrhea ရာသီမလာရင် -
• အသက် ၄၅-၅ဝ အရွယ်မှာ ရာသီမလာတော့တာက မတူးဆန်းပေမဲ့ အသက် အစိတ်မှာ ရာသီမလာတော့ရင် တခုခု ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ အသက် ၂ဝ-၃ဝ ဆိုတာ မျိုးပွါးကိစ္စအတက်ကြွဆုံးအချိန်တွေဘဲ။ ဘယ်လိုဘဲ Protected sex အကာအကွယ် လုပ်ပါတယ် ဆိုနေနေ ကိုယ်ဝန်ကို ပဌစဉ်းစားတာ မမှားဘူး။
• ၄ဝ-၄၅ ဆိုရင် အရင် စဉ်းစားရမှာက Perimenopause သွေးဆုံးတော့မလို့လား။ မရပ်ခင်မှာ မ-မျိုးဥအိမ်ကနေ Estrogen (အီစထိုဂျင်) ထုတ်တာ နည်းနည်းလာလို့ ရာသီရက်တိုတိုလာမယ်။ နည်းနည်းလာမယ်။ ၁၂ လတာ မလာတော့ရင်တော့ ဆရာဝန်တွေကနေ Menopause ပါလို့သတ်မှတ်တယ်။
• Excessive exercise ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း သိပ်များသူတွေမှာလဲ ရာသီ မလာတာမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။ အမျိုးသမီး အားကစားမယ်တွေ ၅-၂၅% မှာအဲလိုဖြစ်ကြတယ်။
• Eating disorders အစားအသောက်နဲ့ဆိုင်တာလဲ ရှိသေးတယ်။ Anorexia nervosa ဘာဆိုဘာမှ စားချင်စိတ် မရှိလို့ မစားမသောက်ရောဂါ ဖြစ်နေသူတွေ ရာသီမလာဘဲ နေတတ်တယ်။
• Other possible causes တခြားဖြစ်နိုင်ခြေတွေကတော့ -
- Thyroid or pituitary gland disorders (သိုင်းရွိုက်) လည်ပင်းကြီး နဲ့ ဦးနှောက်က (ပစ်ကျူထရီ-ဂလင်း) ရောဂါ၊
- Hypothalamus ဦးနှောက်က (ဟိုက်ပိုသဲလ်မတ်စ်) နေရာ ရောဂါ၊
- Breastfeeding ကလေးနို့တိုက်နေချိန်၊
- Obesity လူအဝလွန်ခြင်း၊
- Oral contraceptives ကိုယ်ဝန်တားဆေး၊ (တချို့မှာသာဖြစ်တယ်)၊
- Stress စိတ်-ရုပ် ဖိအားများခြင်း၊
- Polycystic ovarian syndrome and other hormone imbalances ဟော်မုန်းမညီမျှခြင်း၊ မ-မျိုးဥအိမ် အကျိတ်ရောဂါ၊
- Ovarian failure မ-မျိုးဥအိမ် အလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း၊
- Disease of the uterus သားအိမ်ရောဂါ။
၂။ Heavier Than Normal ရာသီလာတာများနေရင် -
• အမျိုးသမီးအများစုဟာ တလမှာ ဟင်းခပ်ဇွန်း ၂-၃ ဇွန်းစာသွေးဆင်းကြတယ်။ ၅ ဇွန်းကျော်ရင် Menorrhagia များတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ များတာကြာရင် Anemia သွေးအားနည်းတာဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဘာလို့များနေလဲ -
• Uterine fibroids or polyps သားအိမ်အလုံး-အကျိတ်၊
• Ectopic pregnancy သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ခြင်း၊
• Blood thinners သွေးကျဲဆေး၊ Steroids (စတီရွိုက်) ဆေးသောက်နေရခြင်း၊
• Birth control pills ကိုယ်ဝန်တားဆေး ပြောင်းသောက်ခြင်း၊
• Clotting disorders သွေးမခဲရောဂါ၊ ဥပမာ Willebrand's disease ရောဂါ၊
• Cancer of the uterus သားအိမ်-ကင်ဆာ၊
• အကြောင်းခံရောဂါမရှိသူတွေမှာ ရာသီဆင်းတာ သူများထက်များနေရင် Oral contraceptives ကိုယ်ဝန်တား စားဆေး သုံးနိုင်တယ်။
• IUD သားအိမ်ထဲပစ္စည်းထည့်သူဆိုရင် Mirena အမျိုးအစားသုံးရင် နည်းစေတယ်။
• Lysteda ဆေးလဲပေးနိုင်တယ်။ သူကနေ သွေးခဲတာအားပေးတယ်။ ဆရာဝန်ပေးမှသာသောက်ပါ။
၃။ Bleeding In Between Periods ကြားရက် သွေးဆင်းနေရင် -
• ဘာမဟုတ်တာလေးတွေလဲ အရင်စဉ်းစား ပြုပြင်ရမယ်။
- တားဆေးသောက်ဘို့ မေ့သွားတာ။
- မွေးလမ်းမှာ အနာ ဖြစ်နေတာ။
• သိပ်ဆိုးဝါးတာတွေလဲ ရှိတယ်။
- Ectopic pregnancy သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ခြင်း၊
- Cancer ကင်ဆာ။
၄။ Painful Period ရာသီလာလို့ တအားနာနေရင် -
• ရာသီလာတာ အနေရအထိုင်ရ မသက်သာသူတွေများတယ်။ ဗိုက်နာတာလဲပါတယ်။ နဲနဲလောက်၊ ၁-၂ ရက် လောက်ဆို စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ရာသီလာချိန်မှာနာတာကို Dysmenorrheal ခေါ်တယ်။ တချို့မှာ ပျို့-အန်ချင်၊ ဝမ်းပျက်၊ ခေါင်းကိုက်၊ ခါးနာတာတွေလဲ ဖြစ်တယ်။ စိတ်မူပြောင်းသူတွေလဲရှိတယ်။ (သပ်သပ်ရေးထားပါတယ်။)
• ရာသီလာချိန်နာတာကို NSAIDs (စတီရွိုက်) မပါတဲ့ အများသုံး အကိုက်-အခဲပျောက်ဆေးသောက်ရင် သက်သာတယ်။
• သတိထားရမှာတွေကတော့ -
- Endometriosis (အင်ဒိုမီထရီယိုးဆစ်) သားအိမ်ရောဂါ နဲ့
- Fibroids (ဖိုက်ဘရွိုက်) သားအိမ် အကျိတ်ရောဂါတွေ ပါတယ်။ ဆေးစစ် ကုသရလိမ့်မယ်။
1. ဆရာရှင့် သမီးဆီးလည်းစစ်တာ ၂ ခါရှိပါပြီ။ ရာသီမလာတာလည်း ၁ လပြည့်ပါတော့မယ်။ ဆီးစစ်တာလည်း မျဉ်းတကြောင်းဘဲ ပေါ်ပါတယ်ဆရာ။ အဲ့လိုမျိုး ဖြစ်တတ်ပါသလားရှင်။ မလာရင်ဘယ်လိုမျိုးဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါသလဲရှင်။ ရာသီလာအောင် ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သင့်ပါသလဲဆရာ။ အရင်က တကြိမ်တခါမျှ အခုလိုမဖြစ်ဘူးပါဘူးရှင်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၉ လပိုင်းထဲက မလာတာပါ ခုဆိုရင် ၁ လပြည့်တော့မယ်ဆရာ။ သမီးကိုယ်တိုင်က ကလေးမလိုချင်စိတ်များနေရင်ကော ဖြစ်တတ်ပါသလားဆရာ။
2. ဆရာကျွန်မအသက်က ၃၅ ပါ။ အိမ်ထောင်ကျတာ ၈ နှစ်ရှိပါပြီဆရာ။ ကလေးမရှိပါ။ ၂ဝ၁ဝ ကနေ ၂ဝ၁၂ လောက်ထိ မာဘလွန်၂၈ သောက်ပါတယ်ဆရာ။ ၂ဝ၁၃ လောက်ကစပြီး မသောက်တော့ပါ။ မသောက်တော့သည့်လမှစပြီး ရာသီမလာတာခုထိပါဆရာ။ ကျန်ခဲ့တဲ့ ၆ လလောက်က မာဘလွန် ပြန်သောက်တော့ ပြန်လာပါတယ်ဆရာ။ အဲဒိနောက်ပိုင်း မသောက်တော့ မလာတော့ပါဘူးဆရာ။ ဆေးခန်းတခေါက်ပြဖူးပါတယ်ဆရာ scan လဲဖတ်ပါတယ်ဆရာ။ ဗိုက်ထဲမှာတော့ အလုံးတို့ဘာတို့မရှိဘူး ပြောပါတယ်။ ဆေးပေးပါတယ်ဆရာသောက်လို့ကုန်တဲ့အထိရာသီမလာပါဘူးဆရာ နောက်တခေါက် မသွားတော့ပါဆရာ။့့ မှာက ဆေးခန်းတခေါက်သွားတာ ၂၅ဝ ကျော်ကျလို့ပါဆရာ။ ဘာဆေးများ ဝယ်သောက် ရမလဲဆရာ။ စိုးရိမ်စရာရှိပါသလားဆရာ။
3. ကျွန်မ တားဆေးကို နှစ်နှစ်ခန့်သောက်ခဲ့ပြီးနောက် ဆေးကို ရပ်လိုက်ပါတယ်။ သောက်လက်စ ဆေးကဒ်အကုန် ရာသီလာအပြီးမှာ နောက်တစ်ကဒ် မသောက်တော့ဘဲ ရပ်လိုက်တာပါ။ အခု တစ်လနေတော့ ရာသီလာရမယ့် အချိန်မှာ မလာဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ ရက်ကျော်တာ (၇) ရက်ရှိပါပြီ။ Test နဲ့ စစ်ကြည့်တော့လည်း Negative ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။ ဆေးခန်း သွားဖို့လိုမလား။ လမမှန်ရင် ကလေးရောရနိုင်ပါ့မလား သိချင်ပါတယ်။
4. ကျမညီမလေး၊ အသက် ၃ဝ၊ အပျို၊ ရာသီမလာတာကြာနေလို့ (့) ကို သွားကုတာ၊ တားဆေး သောက်ခိုင်းတယ်။ သောက်နေတုံးမှာ လာတယ်။ မသောက်တော့ မလာတော့ပြန်ဘူး။
အရင်ဆုံး ဗိုက်နဲ့ တင်ပါးဆုံနေရာကို (အာလ်ထွာဆောင်း) ရိုက်ပါ။ စာတပုဒ်ရေးပါမယ်။ ညီမလေးဆီ ပို့လိုက်ပါ။
• မွေးရာပါ မျိုးပွါးအင်္ဂါတွေ ချို့ယွင်းနေတာ၊ ဥပမာ သားအိမ် မပါတာ၊ ဗဂျိုင်းနား မပါတာ၊ Vaginal septum ဗဂျိုင်းနား အခန်း ၂ ကန့်ဖြစ်နေတာ နဲ့ Imperforate hymen အပျိုမှေး ပိတ်နေတာ။
• အဝလွန်တာ၊ လည်ပင်းကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ (Hypothyroidism ဟော်မုန်းနည်းတာ၊ Hyperthyroidism ဟော်မုန်းများတာ)။
• ကိုယ်ဝန်ကို အရင်ဆုံးစဉ်းစားရမယ်။
• သွေးဆုံးချိန်စောတာလဲ ထည့်တွက်ရမယ်။
• ဘဝလူနေမှုပုံစံကြောင့် ဖြစ်နိုင်တာတွေလဲ ရှိတယ်။
- စိတ်ဖိအားများနေချိန်၊ စိတ်ဓါတ်ကျနေချိန်၊ ကလေးနို့တိုက်နေချိန်၊
- ကိုယ်လက် လှုတ်ရှားမှု သိပ်များနေသူ။ နာတာရှည် ရောဂါတခုခု ခံစားနေရသူ၊
- အစာအာဟာရ ချို့တဲ့သူ၊ အဆီ 15% - 17% body ထက်နည်းနေသူ၊
- ချက်ချင်း ပိန်ကျသွားသူတွေမှာ ပိုဖြစ်လာနိုင်တယ်။
1. Ovary မျိုးဥအိမ်ကြောင့် ၄ဝ%၊ Polycystic ovary syndrome (PCOS) မျိုးဥအိမ်မှာ အကျိတ်လေးတွေ ရှိနေတဲ့ရောဂါ၊ (လူဝမယ်၊ ကိုယ်မွှေးတွေပိုပေါက်မယ်၊ ဝက်ခြံထွက်မယ်၊)။
3. Pituitary (ပစ်ကျူထရီ) ကြောင့် ၁၉%၊
4. Uterus သားအိမ်ကြောင့် ၅%၊ Uterine scarring (Asherman's syndrome) ကိုယ်ဝန်ပျက်-ဖျက်လို့ သားအိမ်ခြစ်ရာကနေ သားအိမ်ထဲ အမာရွတ်၊
5. တခြားအကြောင်းတွေကြောင့် ၁% ဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။
• Pregnancy test ကိုယ်ဝန်ရှိ-မရှိ စစ်သင့်တယ်။
• Thyroid function test လည်ပင်းကြီး-ဟော်မုန်း အခြေအနေတွေကိုလဲ စစ်မယ်။ (TSH) များနေရင် Hypothyroidism ဟော်မုန်းနည်းရောဂါ ဖြစ်နေမယ်၊
• Pelvic ultrasound တင်ပါးဆုံနေရာကို (အာလ်ထွာဆောင်း) ရိုက်မယ်။ CT scan of the head, MRI of the head ဦးခေါင်းကိုရိုက်တာတွေ၊ Endometrial biopsy သားအိမ်အတွင်းသားစ ထုတ်ပြီးစစ်ဆေးတာ၊ Hysteroscopy သားအိမ်ထဲကို ကရိယာနဲ့ကြည့်တာနဲ့ Genetic testing မျိုးဗီဇစစ်တာတွေလဲ လိုရင်စစ်မယ်။
ရာသီလာမမှန်တာ အမျိုးသမီး ၃ဝ% လောက်မှာ ဖြစ်တယ်။ ရာသီ မမှန်ဘူးဆိုယုံနဲ့မပြီးပါ။ ရာသီမလာတာ၊ စောတာ၊ နောက်ကျတာ၊ နည်းတာ၊ များတာတွေ အားလုံးကို မမှန်စာရင်း သွင်းတယ်။ ရာသီမှန်ဘို့ရာ Estrogen နဲ့ Progesterone ဟော်မုန်းတွေ မှန်ရမယ်။ ဦးနှောက်ထဲက (ဟိုက်ပိုသဲလ်မတ်စ်)၊ (ပစ်ကျူထရီ-ဂလင်း) နဲ့ မ-မျိုးဥအိမ်အင်္ဂါတွေ ကောင်းနေရမယ်။
ရေရှည်မှာ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်နိုင်တာတွေကတော့ ကလေးမရနိုင်တာ နဲ့ Osteoporosis အရိုး အားနည်းတာတွေ ဖြစ်တယ်။ ဆေးကုနည်းတွေ အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ဘာလို့ရာသီမလာသလဲ သိရင် ကုသပေးနိုင်တယ်။
2. စိတ်ဖိအား များခြင်း၊
3. အစားအသောက် နည်းလွန်းခြင်း၊
4. ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း များလွန်းခြင်း၊
6. သွေးဆုံးစောခြင်း နဲ့
7. ဟော်မုန်းပါ တားဆေးတွေ ဖြစ်တယ်။
• တကယ်လို့ (တက်စတိုစတီရုန်း) ကျား-ဟော်မုန်း များနေသူဆိုရင် ဟော်မုန်း အစားထိုးကုသနည်း လုပ်ရမယ်။
• Polycystic Ovary Syndrome က မျိုးဥပိမ်မှာ အကျတ်ကလေးတွေရှိနေတာ အဖြစ်မနည်းလှပါ။ စာတပုဒ် ရေးထားပါတယ်။
• Inflammatory Bowel Disease အစာလမ်းရောဂါတခုနဲ့လဲ ရာသီမမှန်တာက ဆက်စပ်နေတတ်တယ်။ လူက ပိန်လာတယ်၊ ဗိုက်နာမယ်၊ ဝမ်းပျက်မယ်။
• ဟော်မုန်းပါ ကိုယ်ဝန်တားဆေးသုံးပါ။ Estrogen နဲ့ Progesterone ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲကို သုံးရမယ်။ အမေရိကားမှာ ၁့၅ သန်းသော အမျိုးသမီးတွေက တားဆေးကို ကိုယ်ဝန်တားဘို့ မဟုတ်တာအတွက် သုံးနေကြတယ်။ ရာသီလာချိန် နာတာသက်သာဘို့၊ ဝက်ခြံပေါက်တာ သက်သာဘို့၊ ရာသီလ-ရက် မှန်ဘို့အတွက် သုံးကြတာ ဖြစ်တယ်။ Hirsutism ဟော်မုန်းရောဂါ၊ ရာသီလာချိန်မှာ (မိုင်ဂရင်း) ခေါင်းမူးရောဂါ ဖြစ်တတ်တာ နဲ့ Fibroids သားအိမ်-အကျိတ် ရောဂါတွေအတွက်လဲ ပေးတယ်။
• တားဆေးကို အပျိုတွေသုံးပေမဲ့ အပျိုရည် မပျက်စေပါ။ ကိုယ်နံ့ကိုလဲ မပြောင်းစေပါ။ Pheromones (ဖီရိုမုန်း) ထုတ်မပေးလို့ လိင်ဆွဲဆောင်မှုကိုလဲ မကဲစေပါ။ လိင်စိတ်ပိုတာလဲ မဖြစ်ပါ။
နွေမိုးဆောင်း ရာသီမရွေး မီးတောက်နေသည့် ကံမမြို့ အနီးမှ ထူးခြားသော နတ်မီးတောက်တောင်
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး သရက်ခရိုင် ကံမမြို့နယ် နတ်မီးတောင် ကျေးရွာအုပ်စု နတ်မီးတောင် ကျေးရွာလေး တွင် တည်ရှိသော နတ်မီးတောက် တောင်တွင် နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း သုံးရာသီလုံး မီးငြိမ်းခြင်း မရှိဘဲ ထူးခြားဆန်းပြားစွာ မြေကြီးကျောက်ပုံ များကြားမှ မီးတောက်နေလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ နတ်မီးတောက် တောင်မှာ သရက်မြို့မှ ဆိုလျှင် ၁၄ မိုင်ခန့်ဝေးပြီး ပြည်မြို့မှ ဆိုလျှင် ၃၉ မိုင်ခန့် အကွာအဝေးတွင် ရှိကာ ကံမမြို့နှင့် သရက်မြို့သို့ ဆက်သွယ်ထားသော ကားလမ်းဘေးတွင် တည်ရှိသည်။
အဆိုပါ နတ်မီးတောက်တောင်မှာ ရှေးနှစ်ပေါင်း မည်မျှကတည်းက တည်ရှိခဲ့သည်ကို ယင်းဒေသတွင် နေထိုင်လျက် ရှိကြသော နှစ်ပေါင်း ၈ဝ ကျော် ဒေသခံများပင် မမီခဲ့ကြကြောင်း၊ ယင်းနတ်မီးတောက် တောင်ကို ဒေသခံများက မင်းမဟာဂီရိခေါ် ပန်းပဲ မောင်တင့်တယ်နတ် လာရောက် နေထိုင်သည်ဟု ယုံကြည်လျက် ရှိကြကြောင်း၊ ယခင်က ဝါတွင်းကာလတွင် မီးတောက်ခြင်း မရှိဘဲ သီတင်းကျွတ်လ ပြီးမှသာ အဆက်မပြတ် မီးတောက်လျက် ရှိကြောင်း၊ ယခုအခါ ပြီးခဲ့သည့် သုံးနှစ်တာ ကာလမှစ၍ ဝါတွင်း ကာလတွင်ပါ မီးတောက်လျက် ရှိကြောင်းနှင့် ယခင်က လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှုကြောင့် လူသူ အသွားအလာ နည်းပြီး လူသိနည်းခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခုလမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ပွင့်လင်းလာသည့် အခါတွင် လူသိများလာကာ လာရောက် လည်ပတ်သူ များလာကြကြောင်း ဒေသခံများ ထံမှ သိရသည်။
အဆိုပါတောင်၏ ထူးခြားချက်များမှာ တောင်၏အပေါ် မြေကြီးနှင့် ကျောက်တုံးများကြားမှ မီးတောက်များ ထွက်ရှိနေခြင်း၊ မိုးဘယ်လောက်ပင် စွေစွေ အဆိုပါ မီးမှာ မသေခြင်း၊ နွေရာသီတွင် ဘေးနားမှ အမှိုက်များ ရှိသော်လည်း မီးကူးစက် လောင်ကျွမ်းမှု မရှိခြင်း၊ အဆိုပါ မီးတောက်နေသော ကျောက်ပုံဘေးနားတွင် အပင်ငယ်၊ အပင်ကြီးများ ရှိသော်လည်း အဆိုပါ အပင်များ၏ အရွက်များမှာ ညှိုးနွမ်းမှု မရှိခြင်း၊ မီးတောက်ရာ နေရာတစ်နေရာ တည်းသာဖြစ်ပြီး ကျန်သည့် နေရာများမှာ မီးတောက်မှု မရှိခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
''ဘုန်းကြီး ဒီကိုရောက်တာ ၃၅ နှစ်ရှိပါပြီ။ ဒီရွာတွေရဲ့ထုံးစံအရ ရွာကို တောမီးဝင်မှာ စိုးလို့ မီးလှန်ရတယ်။ ဒီလိုမီးလှန်တယ် ဆိုတာ ဒီဘက်ရွာကနေ မီးတို့ပြီး လွှတ်ရတာပေါ့။
အဲဒီအချိန်က တောင်ပေါ်မှာ မြက်သက်ငယ်မိုး နတ်ကွန်းလေး တစ်ခုရှိတယ်။ မီးလောင်ပြီဆို ပါသွားပြီလို့ ထင်ထားတာ မီးငြိမ်းလို့ သွားကြည့်တော့ ဒီအတိုင်းပဲ ပြန်မြင်ရတယ်။
မီးအပူရှိန်နဲ့ လောင်ကျွမ်းမသွားဘူး။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်လောက်အချိန်က ဒီနေရာကို ရေနံလာတူးတဲ့ အဖွဲ့က ဒီမှာရှိတဲ့ ကျောက်ပုံကြီးတွေကို စက်နဲ့ထိုးဖျက် ခဲ့ဖူးတယ်။ ရုတ်တရက် စက်တွေ ပျက်သွားပြီး ထိုးတဲ့သူတွေလည်း အန္တရာယ် ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ အခုဒီနေရာမှာ ကျောက်ပုံကို တွေ့နေရတာက ဒီကိုလာကြတဲ့ လူတွေက လိုရာဆုတောင်းပြီး ကျောက်တုံးတွေကို ပုံခဲ့ကြလို့ အခုလို ကျောက်ပုံကြီး ဖြစ်နေတာပါ။ အရင်က ဒီကျောက်ပုံတွေက ဝါတွင်းဆို မီးသေတယ်။ အခု သုံးနှစ်ရှိပြီ ဝါတွင်းလည်း မီးက မသေတော့ဘူး'' ဟု နတ်မီးတောက် ကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဥူးဥက္ကသက မိန့်ကြားသည်။ ၎င်းကျောက်ကြားမှ မီးများကို ညနေပိုင်းနှင့် ညအချိန်များတွင် ကောင်းမွန်ထင်ရှားစွာ တွေ့ရပြီး အလင်းရောင်မှာ အဝေးမှပင် ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ရကြောင်း သိရသည်။
ငယ်ငယ်က နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရင် ဇာတိရွာကိုသွားလည်နေကျ။ အိမ်တိုင်းမှာ ဆီကြိတ်တဲ့ဆုံ ဆိုတာရှိတယ်။ သစ်ပင်ကြီးကြီးရဲ့ အောက်ခြေပင်စည်ကို အလည်မှာ တွင်းပေါက်တခု ထွင်းပြီး ဆုံလုပ်တာပါ။ ဆုံထဲကို မြေပဲဖြစ်ဖြစ် နှမ်းဖြစ်ဖြစ်ထည့်၊ သစ်ကျဉ်ပွေ့မှာ ဝါးကိုင်းတပ်ပြီး နွားတကောင်ကို ဆွဲခိုင်းတယ်။ ဆုံအောက်ခြေမှာ သစ်သားပြားကြီးကို ခွထောက်လုပ်ပြီး ထောက်ပေးထားတာမို့ နွားက ပတ်ခြာလည်သွားရတယ်။ သစ်သားပြားကြီပေါ်မှာ တက်စီးလိုက်ရတာ ပျော်စရာကောင်းတယ်။ ကြာတော့ နှမ်းကနေ နှမ်းဆီ၊ မြေပဲကနေ မြေပဲဆီတွေထွက်လာပြီ၊ လူကြီးတွေက ဆီစစ်စစ်က မွှေးတယ်လို့ပြောတာကို နားမလည်တတ်သေးတဲ့အရွယ်ကပေါ့။
ထိုင်း နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး လက်ပိုင်ရှင် အမျိုး သမီးကြီး ရောဂါဆန်း တစ်ခု ခံစား နေရ
ထိုင်းနိုင်ငံ ဆူရင်ပြည်နယ်မှ အသက် ၅၉ နှစ်အရွယ် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လက်များပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးကြီးသည် လက်နှစ်ဖက်အရွယ်အစား အလွန်ကြီးမားလွန်းသော ကြောင့် နာကျင်ကိုက် ခဲနေသည့် ရောဂါဆန်း တစ်မျိုးကို ခံစားနေရကြောင်း သိရသည်။
ဆာမက်စ်ဆာမန် အမည်ရှိ အဆိုပါ အမျိုးသမီးကြီးသည် ၎င်းရောဂါဆန်းကို ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် ခံစားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီး သူမ၏ လက်အရွယ်အစား ကြီးမားနေမှုကြောင့် ခေါင်းလျှော်ခြင်း သို့မဟုတ် ခေါင်းဖြီးခြင်း ကဲ့သို့သော သာမန်လုပ်ဆောင်မှုများ ကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် အခက်အခဲနှင့် ကြုံတွေ့ရသည်ဟု သိရသည်။
သူမ၏ အခြေအနေကြောင့် ဆာမက်စ်ဆာမန်မှာ ကျောင်းမနေခဲ့ရသည့်အပြင် အသက် ၂ဝ နှစ်အထိ အိမ်တွင်းပုန်း ဘဝအဖြစ် နေထိုင်ခဲ့ရသည်။ သို့သော် အသက် ၂ဝ အရွယ်တွင် မိဘနှစ်ပါး အိုမင်းလာခြင်းကြောင့် မိသားစု ကုန်စုံဆိုင်ကို တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာမှ သူမ၏ ထူးဆန်းသည့် အခြေအနေမှာ သတင်း ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်တွင် ခွဲစိတ်မှု စတင်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ခွဲစိတ်မှုမှာ မအောင်မြင်ဘဲ ပိုမိုဆိုးရွား လာခဲ့ခြင်းကြောင့် ငါးလခန့်အကြာတွင် ခွဲစိတ်မှုနှစ်ကြိမ် ထပ်မံပြု လုပ်ခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာတွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ခွဲစိတ်ဆရာဝန် တစ်ဦးသည် ဆာမက်စ်ဆာမန်ထံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ သူမသည်လက်များ အလွန် အမင်းကြီးထွားသည့် ရောဂါဆန်းတစ်မျိုးကို ခံစားနေရကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အဆိုပါရောဂါသည် အလွန်ဖြစ်ခဲလှသော ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆာမက်စ်ဆာမန်သည် အဆိုပါရောဂါ ခံစားနေရသည့် ကမ္ဘာ့ တစ်ဦးတည်းသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ရောဂါဆန်းဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းရင်းကို မဖော်ထုတ်နိုင်သေး၍ ကုသရန် လည်း ဆေးမရှိကြောင်း ဂျပန် ခွဲစိတ်ဆရာဝန် အီဂျူအူချင်းဂူမာက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဇာဇာထက် ဘာကြောင့် ၀တ်လစ်စားလစ်ဓာတ်ပုံမော်ဒယ် ဖြစ်လာသလဲ
“ပိုက်ဆံပေးပြီးတော့ ရိုက်ပါရစေဆို တာတောင် နင့်ရုပ်နဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ စဉ်းစားဦး၊ အဲလိုမျိုး အရမ်းနှိမ်တာ…”
ပညာရေးအတွက် ဂျပန်သွားဖို့ ရည် ရွယ်ပြီး ဂျပန်သံရုံးမှာ ဂျပန်စာသင်နေရင်း Sexy ဓါတ်ပုံများနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ မော်ဒယ်များကို အားကျပြီး ဆရာဂျွန်လွင် ဆီမှာ သင်တန်းတက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သင်တန်းကာလတလျှောက် သင်ခန်းစာများကို စိတ်မ၀င်စားခဲ့ဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြတ်သန်းခဲ့ကာ သင်တန်းဆင်းပြီး ကျောင်းဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၁ မှာတော့ မိခင်ဖြစ်သူ လေဖြတ်ရောဂါခံစားခဲ့ ရခြင်းကြောင့် ဂျပန်သွားမည့် အစီအစဉ်ကို လက်လျှော့ကာ မော်ဒယ်လောကထဲ ခြေစုံပစ်ဝင်ခဲ့ပြီး ယနေ့မှာတော့ Sexy များနဲ့ Sexy Party များမှာ မပါမပြီး ဇာဇာထက်ဆိုတဲ့ နာမည်တခုကို ရယူပိုင် ဆိုင်နေပြီဖြစ်တဲ့ မော်ဒယ် ဇာဇာထက်က သူမအတွက် ကြိုးစားချင်စိတ်နဲ့ မခံချင်စိတ်တွေ အဓိကဖြစ်စေခဲ့တာ နာမည်ကြီး ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ဇာ ဒီနှစ်ပိုင်းထဲမှာ Sexy ပုံတွေ Sexy Party တွေနဲ့ ပိုပေါက်လာခဲ့တယ်။ နောက် ဇာ ယုံကြည်တာက ဇာ့ကျောမှာ နေ့နံ မကိုက်ပေမယ့် ဇာကြိုက်လို့ထိုးထားခဲ့တဲ့ ကျားရုပ်လေးကြောင့်လို့လည်း ထင်တယ်။ ဇာ စလုပ်တုန်းကတော့ ကော့မန့်တွေ အများကြီးရတာပေါ့နော်။ တင်ကကြီး တယ်၊ ခါးကကြီးတယ်၊ ဘောလုံးသမား ဆိုဒ် အမျိုးမျိုးပေါ့။ ဒါတွေကို ဇာ ဘယ်လိုမှ မခံစားရဘူး။ ဒါပေမဲ့ နာမည်ကြီး ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ပဲ မောင်နှမလိုကို ခင်တာ။ သူက နွယ်နွယ်ထွန်းတို့ ပေါက်နေ တဲ့အချိန်မှာ ရိုက်ပြီးရင် ဘယ်သူက ဘယ်လိုလှတာ… ဖြူဖွေးနုဖက်နေတာပဲ … ဘယ်လို Sexy ဖြစ်တာဆိုပြီး လာလာပြော တယ်။ အဲတော့ ဇာလည်း ရိုက်ချင်တာပေါ့ နော်။ ပိုက်ဆံပေးပြီးတော့ ရိုက်ပါရစေဆို တာတောင် နင့်ရုပ်နဲ့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ စဉ်းစားဦး၊ အဲလိုမျိုး အရမ်းနှိမ်တာ…
အခု ဇာ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဖြစ်လာတယ်။ အဲတော့ ကျွန်မ ဖြစ်နေပြီဆိုပြီး သူ့ဖေ့စ်ဘွခ်မှာ သွား Add တယ်။ အရင်ကဆို သိပ်ခင်ခဲ့ကြတာ။ ဒါပေမဲ့ ဇာ့ကို Sexy Model အနေနဲ့ တကယ့်ကို ရွံရွံရှာရှာပုံစံမျိုးနဲ့ ကြည့်ခဲ့တာ။ သူသာ ဇာ့ကို ခုချိန်မှာ ရိုက် ပါမယ်လို့ဆိုခဲ့ရင် ဇာ အခုမပြောနဲ့ နောင် တသက်လုံးလည်း သူ့ကိုဆိုရိုက်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူက ဘာကို Jealousy ဖြစ်ပြီးတော့ ဇာ့ကို မုန်းနေမှန်း မသိဘူး။ သူက ဇာ့ကို ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဖြစ်လာရင် လည်ဖြတ်ခံလိုက် မယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာ။ ရိုက်လည်း ဇာ့ပုံနဲ့ ဘယ်လိုမှ ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ပြောခဲ့တာ။ လူတိုင်းကို သူအဲလိုထင်လို့မရဘူး ဆိုတာ ဇာပြချင်တာ။ သူပြောခဲ့တဲ့စကား တခွန်းက ဇာ့အတွက် တွန်းအားတွေ ဖြစ်စေခဲ့ပြီး ဇာအခုလိုဖြစ်လာတော့ သူမခေါ် ရဲတော့ဘူး” လို့ ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။
ဇာဇာထက်က ဓာတ်ပုံဆရာ နာမည်ပြောဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ကို ၀တ်လစ်စားလစ်မော်ဒယ်ဖြစ်အောင် တွန်းပို့ပေးလိုက်သူက နာမည်သုံးလုံးနဲ့ လူငယ်ပိုင်းထဲက နာမည်ကြီး ဓာတ်ပုံဆရာလို့သာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ခေတ်မီ တိုးတက် လာသည့် အလျောက် ဆန်းပြားသော လျှပ်စစ် ပစ္စည်း များနှင့် လူ့အသုံး အဆောင် ပစ္စည်း များမှာ လည်း တစ်ခု ထက် တစ်ခု ပိုမို ကောင်းမွန် လာသည့် အတွက် လူအများ မှာလည်း အသစ် အဆန်း ဘက်ကို ဦးစားပေး ရွေးချယ် လာကြသည်။ ယခုခေတ်မြို့နေ လူငယ် အများစုဖုန်းကိုင် လာနိုင်ပြီး ဆွေ မျိုး သားချင်း၊ ချစ်သူ သမီးရည်းစား များ နှင့် ဖုန်းပြော သည့်အခါ ပုံမှန် အသံ dv (decivel) ထက်ပိုသော အသံကို ကြားလျှင်ဖြစ်စေ၊ နေ့စဉ် ရက်ဆက် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဖုန်းပြော လျှင်ဖြစ် စေ နားကို မထိခိုက် နိုင်သော်လည်း ပုံမှန် အသံထက် ကျယ်သော စကား ပြောသံ နှင့် အချိန်ကြာသော အခါ နား ထိခိုက် နိုင်ကြောင်း နား၊နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း ဆေးရုံမှ အထူးကု ဆရာ ၀န် ဒေါက်တာ ၀င်းထိုက် ကြည်က ပြောကြားသည်။
ဖုန်းကို တစ်နေ့တည်း ဆက် တိုက် ခြောက်နာရီ နှင့် အထက်ပြော ပြီး ဖုန်းပြောသံမှာ လည်း သတ်မှတ် ထား သော dv (decivel) အသံထက် ကျယ်ရင် နားအူ၍ ထုံတတ် ကြောင်း၊ ပုံမှန် နားထောင် နိုင်စွမ်း ရှိသော အသံ နှင့် ပြောလျှင် နားကို မထိခိုက် နိုင် သော်လည်း ကြာရှည် လာချိန်တွင် နားလေး သွားနိုင် ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ကြာရှည်စွာ ဖုန်းပြော တတ်သည့်လူ ငယ်များ၊ ဖုန်းပြော လျှင် အော်ပြော မှ ကျေနပ် ကြသည့် သက်ကြီးရွယ်အို များမှာ အသံ ကျယ်လောင် စွာ ဖုန်း ပြောခြင်း မှ ရှောင်ကြဉ်ရန် လိုအပ် ကြောင်း dv (decivel) ၁၀၀ နှင့် အ ထက် ကျော်လျှင် နားလေး၊ နားအူ၊ ထုံတတ်ကာ နားကို လျင်မြန်စွာ ထိ ခိုက်မှုဖြစ်စေ နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ နားလေး၊ ထုံထိုင်း ရောဂါ မဖြစ် စေရန် ပုံမှန်ပြောနေ dv (decivel) ၆၀ နှုန်းဖြင့် နား ထောင်ကာ အလေ့အကျင့် လုပ်သင့် ကြောင်း၊ ထို့ပြင် ဖုန်းဖြင့် စကားပြော နေချိန်တွင် တစ်ဖက်မှ နားထောင် နိုင်စွမ်း ထက် ကျယ်သော အသံဖြင့် ပြောလျှင် နား အတွင်းပိုင်း ရှိ အာရုံခံ ဆဲလ်များ ကိုထိကာ ထုံထိုင်း တတ် ကြောင်း၊ ထိုသို့ ဖြစ်လာလျှင် တိတ် ဆိတ်ငြိမ်သက်သော နေရာများတွင် တစ်ရက်မှ နှစ်ရက် အထိ အနားယူ သင့်ကြောင်း၊ မသက်သာ လျှင် နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း အထူးကု ဆရာဝန် များနှင့် အမြန်ဆုံး ပြသ ကာ ကာ ကုသမှု ခံယူ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း အထူးကု ဆေးရုံကြီး မှ သိရသည်။
ရှေးဟောင်း ဘုရား ရုပ်ပွားတော် တစ်ဆူ တွေ့ရှိ
အမ်း အောက်တိုဘာ ၂၁
ရခိုင်ပြည်နယ်၊အမ်းမြို့ မြောက်ဘက်အုပ်စု၊ အေးမြသာယာကျောင်း မြောက်အရပ်၌ ရှိသော အမှတ်(၂) တပ်မတော်ဆေးရုံ ကုတင် (၃၀၀) တပ်နယ်မြေ အတွင်း ရေပိုက်လိုင်းများ ပြန်လည်ပြုပြင်ရာတွင် တပ်ကြပ်ကြီး ခင်မောင်ချို (ယာဉ်ပြင်) က တောင်ကမ်းပါးပြိုကျရာမှ ဘုရားရုပ်ပွားတော်အား (၁၇.၁၀.၂၀၁၄)ရက် နေ့လည် (၂)နာရီ အချိန်က တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ရှေးဟောင်းဘုရားရုပ်ပွားတောါမှာ ရွှေသားအစစ်၊ ဉာဏ်တော်အမြင့်(၂)
လက်မ၊ အလေးချိန် (၂)ကျပ် (၅)ပဲ (၂)ရွေးသားနှင့် ဘုရားပုလ္လင်တွင် စိန်နှင့်တူသော ကျောက်(၁၅)လုံး ပါရှိပါသည်။
အဆိုပါ ရုပ်ပွားတော်ကို အေးမြသာယာကျောင်း ဓမ္မာရုံ၌ ပူဇော်ထားရှိရာ ဒေသခံများ လာရောက်ဖူးမြှော်ကြသည်။
1. ဆရာရှင့် ကျွန်မ အသက် 28 ထဲမှာပါ။ ကျွန်မအလုပ်က Quantity Surveyor ပါ။ ကွန်ပျူတာနဲ့ စာရင်းဇယားလုပ်ရပါတယ်။ နားအူတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးချင်ပါတယ်။ ပြီးခဲတဲ့တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေ ခေါင်းလျှော်ပါတယ်။ တနင်္လာနေ့ (13.10.2014) မနက် အိပ်ရာထတော့ နားနဲနဲအူပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့လဲ နဲနဲအူပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက်ခေါင်းလျှော်မိပါတယ်။ နေ့ခင်းပိုင်း ရုံးမှာခေါင်းမူးလာလို့ နားအူတာလဲ မသက်သာတာနဲ့ ဆေးခန်းပြပြီး အိမ်ပြန်နားပါတယ်။ ဆေးပေးလိုက်ပါတယ် (Dhaperazine Prochlorperazine Maleate 5mg/Tab, Gitako Tabs, Vit C (250MG) ဆိုပြီး ဆေး ၃ မျိူးပေးပါတယ်။ ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေး သောက်ပြီး အဲဒီနေ့ ညဘက်မှာ ကောင်းသွားပါတယ်။ ကြာသပတေး၊ သောကြာ နှစ်ရက်သက်သာပါတယ် နားလဲမအူပါဘူး။ စနေမနက် ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးသောက် အနားယူတော့ စနေည ဘက် ပြန်ကောင်းပါတယ် တနင်္ဂနွေလဲ ကောင်းပါတယ်။ ယနေ့ တနင်္လာနေ့ (20.10.2014) မနက်ပြန်ပြီး နားအူပါတယ်။ နားအူတဲ့အခါ လူက နှုံး ချိချိ ဖြစ်နေတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ တခါတခါ ခေါင်းပါမူးလာတယ်။ ဆရာရှင့် အဲလိုဖြစ်တာ နားကတခုတခုဖြစ်နေတာလား။ ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြော ကြောင့်ဖြစ်တာလား။ သွေးအားနည်းလို့ဖြစ်တာလား (သွေးပေါင်ချိန်ကတော့ 120/80 လို့ဆရာဝန်ပြောပါတယ်)။ စိုးရိမ်ရပါသလား။ ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲဆိုတာ လမ်းညွှန်ပေးပါဆရာ။
2. I am 35 years old man and getting MDR TB treatment since June 2013 and onwards. I also have diabetes. I have now severe hearing loss and tinnitus all the time that disturb my daily life. Hopefully MDR treatment dose will be completed in Feb 2015. My question is my hearing level can be better or normal and Tinnitus can disappear.
3. ဆရာရှင့် နားထဲမှာ Air-corn စက်လည်သံ၊ ပုရစ်အော်သံလိုမည်နေပါသည်။ အကျယ်ကြီးမဟုတ်ပါ။ ဘေးမှ အသံများ ရှိပါက မသိသာပါ။ တိတ်ဆိပ် နေလျင်တိုးတိုးလေးကြားနေရပါသည်။ ခေါင်းမမူးပါ။ ခေါင်းမကိုက်ပါ။ မျက်နှာ နဲနဲတင်းပါသည်။ ဇက် ကျီးပေါင်းရှိပါသည်။ ၂ ပါတ်ခန့်ရှိပါပြီ။ ရိုးရိုးဆရာဝန်ကတော့ အားနဲခြင်းကြောင့်ဟု ပြောပါသည်။ ဆရာရဲ့ Opinion ကိုလေးစားစွာ တောင်းခံအပ်ပါသည်။
• Vertigo အမူးရောဂါ (အရက်ကြောင့် မဟုတ်ပါ) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/01/vertigo.html
ဂင်းနက်စ်မှတ်တမ်းဝင်သွားသော တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဗုံပုံသဏ္ဌာန် အဆောက်အအုံ
အန်ဟွီ အောက်တိုဘာ ၁၈
တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း အန်ဟွီပြည်နယ်တွင် တည် ဆောက်ထားသော ၁၈ မီတာအမြင့်ရှိ ဗုံပုံသဏ္ဌာန် အဆောက်အအုံတစ်ခုသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဗုံပုံ သဏ္ဌာန်ရှိ အဆောက်အအုံအဖြစ် ယနေ့ ဂင်းနက်စ် မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ကြောင်း ဆင်ဟွာသတင်းတွင် ဖော်ပြ ပါရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ဝမ်ဒါအုပ်စုကုမ္ပဏီက ယွမ်သန်း ၁၃ဝ (ကန်ဒေါ်လာ ၂၁သန်း) အကုန်အကျခံဆောက်လုပ် ထားသော အဆိုပါဗုံပုံသဏ္ဌာန်အဆောက်အအုံမှာ အန်ဟွီ ပြည်နယ် မြို့တော်ဟေဖိုင်းမြို့၌တည်ရှိပြီး နှစ်ထပ် အဆောက်အအုံဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအဆောက်အအုံအကျယ်ဆုံးအပိုင်း၏ အချင်း မှာ ၅၈ ဒသမ ၅ မီတာရှိပြီး ကြမ်းပြင်အကျယ်မှာ ၄၆၅ဝ စတုရန်း မီတာရှိကြောင်း၊ အဆောက်အအုံထဲ တွင် တရုတ်ရိုးရာဗုံယဉ်ကျေးမှုနှင့်အန်ဟွီဒေသဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို ပြသထားရှိကြောင်းသိရ သည်။
စင်ကာပူတွင် ဂြိုဟ်သား များနှင့် အသွင်တူသော ရေသတ္တဝါ တစ်ကောင် ဖမ်းမိ
စင်ကာပူနိုင်ငံမှ ငါးဖမ်းသမား တစ်ဦးသည် ဆန်တိုဆာ ကျွန်းဆွယ်၌ ငါးဖမ်းနေစဉ် ထူးခြားဆန်းကြယ် လှသည့် ဂြိုဟ်သားနှင့် အသွင်တူသော ရေသတ္တဝါ တစ်ကောင် ကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ထူးဆန်းသည့် ရေသတ္တဝါသည် ရေလက်ဝါး၊ ရေဘဝဲနှင့် ဂြိုဟ်သား တို့၏ပုံစံနှင့် အနည်းငယ်စီ တူညီပြီး စမ်းလက်တံကဲ့သို့သော လက်တံပေါင်း ၁ဝဝ ကျော်ရှိ သည်ဟု သိရသည်။
မိမိ ငါးဖမ်းခဲ့သည့် သက်တမ်း တစ်လျှောက်တွင် သမုဒ္ဒရာအတွင်းမှ ထူးဆန်းသည့် သတ္တဝါအချို့ကို တွေ့မြင်ခဲ့ဖူးကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ယခုကဲ့သို့သော ထူးဆန်းသည့် ရေသတ္တဝါမျိုးကို ပထမဆုံး အကြိမ်တွေ့ဖူးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ရေသတ္တဝါ၏ ပုံစံမှာ ဂြိုလ်သား တစ်ကောင် သို့မဟုတ် သန္ဓေ ပြောင်းသတ္တဝါ တစ်ကောင်နှင့် တူသည်ဟု မိမိအနေဖြင့် ထင်မြင်မိကြောင်း အဆိုပါ ရေသတ္တဝါကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သူ အွန်ဟန်ဘွန်းက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ရေသတ္တဝါသည် မည်သည့် ရေသတ္တဝါဖြစ်သည် ဆိုခြင်းကို သိရှိနိုင်ရန် အတွက် မိတ်ဆွေ အားလုံးကို မေးမြန်းခဲ့ကြောင်း၊ အင်တာနက် ပေါ်တွင်လည်း အဆိုပါ သတ္တဝါမှာ မည်သည့် သတ္တဝါ အမျိုးအစား ဖြစ်သည်ဆိုခြင်းကို ရှာဖွေခဲ့ ရကြောင်း၊ သို့ရာတွင် တစ်စုံတစ်ဦးကမျှ ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း ဘွန်းက ပြောကြားသည်။
(၁) ဆရာခင်ဗျာ ကျွန်တော်အခု မျက်မှန် ပါဝါနှစ်ရာတပ်ထားရပါတယ်။ စာမေးပွဲကဖြေနေတော့ စာတော်တော်ကြည့်ရပါတယ်။ ဆေးတက္ကသိုလ် (့) က ပထမနှစ် ဆေးကျောင်းသားပါ။ မျက်မှန်တပ်ပြီးစာရေးချိန်မှာ မျက်စိကမျက်ရည်ခြောက်ပြီး မျက်စိယားသလိုခံစားရတယ်။ မျက်နှာသစ်ပြီးချိန်မှာလဲ မျက်စိစပ်တယ်။ ပြီးတော့ ညနေနေဝင်ချိန် အလင်းရောင် ကျသွားတဲ့အချိန်မှာ အမြင်က မရှင်းတော့ဘူး။ မျက်မှန်တပ်ထားရင်နေ့ပိုင်းမှာ အမြင်ကြင်လင်ပေမယ့် ညပိုင်းမှာ မှုန်ဝါးဝါးဖြစ်လာတယ်။
(၂) ကျွန်မသည် ကွန်ပျူတာနှင့် အလုပ်လုပ်နေရသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိများ မကြည်မလင်ဖြစ်ပြီး၊ အမြင်အာရုံ မှုံဝါးဝါး ဖြစ်နေပါသည်။ မျက်မှန်အတွက် စမ်းပြီးပါပြီ။ ပါဝါလဲရှိပါသည်။ အမြဲခပ်လို့ ကောင်းမဲ့ မျက်စဉ်းဆေးရှိလျှင် ညွှန်ပေးစေလိုပါတယ်။
သူများနိုင်ငံတွေမှာ ဆေးဆိုင်ကနေ အလွယ်ဝယ်ရတာ နဲ့ ဆရာဝန်လက်မှတ်နဲ့မှ ဝယ်ရတဲ့ မျက်စဉ်းတွေလို့ ခွဲထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ ပိုက်ဆံပေးရင် ကြိုက်တာကို ကြိုက်သလောက် ရနိုင်တယ် ထင်တယ်။
မျက်စိက Dryness ခြောက်နေလို့၊ Redness နီရဲနေလို့၊ Itching ယားနေလို့၊ Allergies (အလာဂျီ) ရနေလို့၊ Soreness နာနေလို့၊ Swelling ရောင်နေလို့၊ Eye Discharge မျက်ရည်-မျက်ဝတ် တခုခုထွက်နေလို့ နဲ့ Infection ပိုးဝင်လို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့် မျက်စဉ်းလိုတယ်။ မျက်စဉ်းမှန်တာကို ရွေးသုံးတတ်ဘို့လိုပါမယ်။
စာအကြာကြီးဖတ်သူ၊ ကွန်ပြူတာ အကြာကြီး သုံးသူတွေမှာ ဖြစ်တတ်တယ်။ အိမ်အပြင်မှာ အကြာကြီး ထွက်နေသူ၊ လေယျာဉ် အကြားကြီး စီးရသူ၊ ရေသောက် နည်းသူတွေမှာလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ အသက်ကြီးသူတွေမှာ ဇရာဖြစ်စဉ်ကြောင့် ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီးကြီးတွေမှာ သိသိသာဖြစ်မယ်။ Nasal decongestants နှာခေါင်းထဲထည့်ဆေး၊ Diuretics ဆီးသွားစေတဲ့ဆေး နဲ့ Antidepressants စိတ်ကျဆေး သုံးနေသူတွေမှာလဲ လာဖြစ်တတ်တယ်။
မျက်စိ ခြောက်နေရင် Decongestant eye drop အမျိုးအစားမျက်စဉ်း ကိုရှောင်ပါ။ ရက်ရှည်ခြောက်နေသူတွေအတွက် အရည်ထက် Gel or Ointment ကော်မျက်စဉ်း ပိုသင့်တယ်။ ဒါမျိုးခပ်လိုက်ရင် ခဏတာ ကြည့်မကောင်းဖြစ်တာမို့ ညမအိပ်ခင် ခပ်နိုင်တယ်။ မျက်စဉ်းတိုင်းမှာ အထားခံအောင် ဆေးတခုခုထည့်ရတယ်။ တချို့က ဒါမျိုးနဲ့ မတည့်ကြဘူး။ မျက်စဉ်းခပ်လိုက်မှ မျက်စိက နီလာ၊ ယားလာ၊ ရောင်လာရင် မတည့်ဘူးမှတ်ပါ။ ဒါကြောင့် Non-preserved eye drops အထားခံတာမပါတဲ့ မျက်စဉ်းကို အသုံးခိုင်းတယ်။
Dryness မျက်စိခြောက်တာ၊ Allergy (အလာဂျီ) ရတာ၊ Infection ပိုးဝင်တာ၊ Tiredness မျက်စိအသုံးများတာ နဲ့ ဒီအကြောင်းတွေ စုပေါင်းဖြစ်တာတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်တယ်။ Lubricating drop သုံးရတယ်။ ခပ်ရမှာကတော့ Decongestant eye drops ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်ကို အရင်ပြသင့်တယ်။ သွေးကြောလေးတွေကို ကျဉ်းစေမယ်။ အခြေခံရောဂါ ရှိနေရင် အရှာရခက်စေတယ်။ သုံးမိရင် မျက်စိခြောက်စေတယ်။ ကြာရင် Irritation ကလိခံနေရသလိုမျိုး ဖြစ်စေပြီး နီလာမယ်။ သူငယ်အိမ်ကိုလဲ ကျယ်စေနိုင်တာ သတိထားပါ။
• Allergies, Eye Itching and Eye Drops (အလာဂျီ) အတွက် မျက်စဉ်း
Itchiness ယားတယ်ဆိုတာ (အလာဂျီ) ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ တခါတလေ ရောင်တာ၊ နီရဲနေတာ၊ မျက်ရည်ကျတာ၊ မျက်ခွံမို့တာတွေ အတွက်လဲ သုံးနိုင်တယ်။ (အလာဂျီ) ကြောင့်ဆိုရင် Lubricating drops လဲသုံးနိုင်တယ်။ မျက်စိကို မကြာခဏ ဆေးပေးရမယ်။ Antihistamine eye drops (Alaway or Zaditor) မျက်စဉ်းမှာ (အလာဂျီ) ရစေတဲ့ဓါတ်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆေးပါတယ်။ တချို့ မျက်စိနီနေတာအတွက်သုံးတဲ့ Decongestant eye drops မျက်စဉ်းတွေထဲမှာ Antihistamines (အင်တီဟစ်တမင်း) ပါနေတတ်တယ်။
Lubricating eye drops ကိုသုံးတယ်။ ဘာလို့ဖြစ်သလဲဆိုတာသိပါ။ ငိုထားလို့၊ ရောင်ရမ်းလို့ နဲ့ (အလာဂျီ) တွေကြောင့် ဖြစ်တာတွေမှာ သုံးနိုင်တယ်။
• Eye infection မျက်စိပိုးဝင်တာကြောင့် မျက်ဝတ် အဖြူ-အဝါတွေထွက်တာအတွက် မျက်စဉ်း -
1. Bacterial conjunctivitis (ဗက်တီးရီးယား) ကြောင့်ဆိုရင် မျက်စိနီပြီးနာမယ်။ မျက်ဝတ်တွေ ထွက်မယ်။ Rx antibiotic eye drops ဆရာဝန်လက်မှတ်နဲ့ဝယ်ရတဲ့ ပိုးသေဆေးပါမျက်စဉ်းလိုမယ်။
2. Viral conjunctivitis (ဗိုင်းရပ်စ်) ကြောင့်ဖြစ်တာက ခပ်ပေါ့ပေါ့ကနေ ဆိုးတာအထိဖြစ်နိုင်တယ်။ မဆိုးရင် သူ့ဖါသူ ပျောက်မယ်။ ဆိုတာကြောင့် နီရဲ၊ မျက်ရည်ကျ၊ မျက်လုံးနာ၊ မျက်ဝတ်ထွက်တာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ မျက်စိ ကြည့်မကောင်းတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Lubricating eye drops သုံးနိုင်တယ်။ ရေအေးဝတ်၊ ရေခဲကပ်ပေးပါ။
3. Allergic conjunctivitis (အလာဂျီ) ကြောင့်ရောင်တာ အဖြစ်များတယ်။ ယား၊ ရောင်၊ မျက်ရည်ကျ၊ မျက်စိ နီရဲတာတွေ ဖြစ်မယ်။ မကူးစက်ဘူး။ Lubricating နဲ့ Antihistamine eye drops မျက်စဉ်းသုံးပါ။ ရေအေးဝတ်၊ ရေခဲကပ်ပေးပါ။ Antihistamines (Zyrtec or Claritin) စားဆေး သောက်နိုင်တယ်။ (အလာဂျီ) ကြာနေသူတွေက Benadryl ကို လနဲ့ချီသောက်ရတယ်။
Saline ဆားရည်ပါတာတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင် Steroids (စတီရွိုက်)၊ Antihistamines (အင်တီဟစ်တမင်း)၊ NSAIDs အနာသက်သာဆေး၊ Anesthetics ထုံဆေး ပါတာတွေ၊ Sympathomimetics, Beta blockers, Para-sympathomimetics, Para-sympatholytics, Prostaglandins ဆေးတွေပါတဲ့ မျက်စဉ်းတွေ ရှိတယ်။ ဘာဆေးမှ မပါတဲ့ Lubricating နဲ့ Tear-replacing solutions တွေလဲ ရှိတယ်။ Rinse eye drops ခေါ်တယ်။ Glaucoma eye drops မျက်စိရေတိမ်မျက်စဉ်း၊ Mydriatic eye drops သူငယ်အိမ်ကို ကျယ်စေတဲ့ မျက်စဉ်းတွေလဲ ရှိတယ်။
- Alcon Naphcon A Eye Allergy Relief (အလာဂျီ) အတွက် မျက်စဉ်း
- Bausch & Lomb Opcon-A Eye Allergy Relief Drops မျက်စိ (အလာဂျီ) အတွက် မျက်စဉ်း
- Betamethasone eye drops (ကော်တီဇုမ်း) မျက်စဉ်း
- Visine A Eye Allergy Relief Eye Drops (အလာဂျီ) အတွက် မျက်စဉ်း
- Walgreens Sterile Eye Allergy Relief Eye Drops (အလာဂျီ) အတွက် မျက်စဉ်း
- Zaditor Antihistamine Eye Drops (အလာဂျီ) အတွက် မျက်စဉ်း